Ngethamsanqa, uRosa Montero "ubenomdla" | Uncwadi lwangoku
Umnqweno omhle Yeyona noveli yamva nje ngumbhali odumileyo waseSpain uRosa Montero. Yapapashwa yindlu yokupapasha Alfaguara, nge-27 ka-Agasti ka-2020. Umbhali uvakalise kudliwanondlebe lwephephancwadi IsiZenda ukuba eli bali limalunga:
Eli bali libalisa ngendlela kwidolophu encinci emazantsi eSpain ubomi babalinganiswa abaphambili, uPablo noRaluca, abadibana khona. Zombini zidlule kwiimeko ezintsonkothileyo kwaye ubunyani bazo bohluke ngokupheleleyo, kodwa ngandlela thile ziya kuncedisana, kuba zibubumnyama nokukhanya. Ngale ncwadi, umbhali ubonakalisa ngobomi, ulonwabo kunye neziphumo zeentlungu zangaphambili.
1 Isishwankathelo seThamsanqa (2020)
2 Uhlalutyo lwenhlanhla
2.2 Isibini esikhokelayo
2.2.1 UPablo Hernando
2.2.2 URaluca Garcia Gonzalez
2.3 Abanye abalinganiswa
4 Ulwazi ngobomi bomlobi
4.1 Izifundo zobungcali
4.2 Umsebenzi wobuntatheli
4.3.1 Iinoveli zikaRosa Montero
Isishwankathelo se Umnqweno omhle (2020)
UPablo Hernando uyilo loyilo Quien uhamba ngololiwe Kwinkomfa kwi emazantsi eSpain. Enzulu ngeengcinga, uphendula bona uphawu "Luyathengiswa" mgama, iboniswe kwifestile yendlu endala ejonge kwiitreyini. Ngokukhawuleza, isigqibo sokuya ezantsi ngenjongo thenga yatsho iflethi. Ngelo xesha izizathu zeso sigqibo singalindelekanga nesiphazamisayo asaziwa.
Le ndlu isePozonegro, idolophu egxothiweyo enabemi abangaphantsi nje kwewaka. Ngaphambili, le dolophu yayonwabile ngenxa yomzi mveliso wezemigodi, nangona kwakungekho mkhondo wala maxesha amnandi. Nangona le ndawo ingahambelani nendlela yokuphila kaPablo, Apho uthatha isigqibo sokubalekela, edakwe kukudakumba okunzulu.
Kancinci kancinci, umlinganiswa ophambili uya kudibana nabalinganiswa abanomdla kwimeko yakhe. Ekuqaleni kubaqeshi besakhiwo esingakhathalelwanga, phakathi kwayo evelele ummelwane wayo, uRaluca. Lo mfazi oyindumasi uza kuzisa utshintsho olukhulu kubomi baloo ndoda, eya kuqala ukuxabisa loo miba ibingenamsebenzi ngaphambili. Uya kuba kukukhanya ebendikudinga ebusweni bobumnyama.
Uhlalutyo Umnqweno omhle
Umnqweno omhle yinoveli umbhali ayichaze njenge: “… a into evuyisayo ekhoyo ngaphandle kokubulala kwaye kugcwele iimfihlakalo kunye neemfihlakalo ”. Ibekwe kwidolophu eyintsomi ebizwa ngokuba yiPozonegro, kunye nesiqwenga sayo sichazwa ngu umbalisi owaziyo yonke into, kumaphepha angaphezu kwayi-300. Incwadi ihlelwe izahluko ezimfutshane, apho ibali lihamba ngokulula nangokucacileyo.
Ungumyili oneminyaka engama-54 ubudala, othe waphazamiseka, ngubani ibonakaliswa ngokusesikweni nangokufihlakeleyoNgenxa yolu hlobo lukhethekileyo, ubuhlobo bakhe bambalwa. UPablo ufikelele kwinqanaba apho ubuza iinkolelo zakho zangaphambili, izenzo, kunye nezigqibo; nto leyo mhlawumbi eyamqhubela ekubeni athathe utshintsho olunjalo kubukho bakhe.
URaluca Garcia Gonzalez
Ku malunga igcisa ukusuka ePozonegro, ngokukodwa kwimifanekiso yokupeyinta amahashe; Ungumfazi onamandla aphuphumayo, ngobuntu obutsha, obuchwayitileyo kwaye ugcwele ubuntu. Ngaphandle kokuphila ubomi obuzolileyo, ugutyungelwe yimfihlakalo yexesha lakhe elidlulileyo, awayezifihle kakuhle; mhlawumbi kuba uninzi lwedolophu lukwimeko efanayo.
Abalinganiswa abasesekondari abaliqela bayasebenzisana kumxholo webali, owakheke kakuhle, njengabalinganiswa abaphambili. Phakathi kwezi Abaliqela oogxa bakaPablo bavelele, njengoRegina, uLourdes noLola, bangabokuqala ukukhathazeka emva kokunyamalala kwakhe. Ukwengeza, amaqabane akhe amaJamani noMatías, owazisa amapolisa emva kokuba engekho kwinkomfa eyayiseMalaga.
Ngakolunye uhlangothi, kunjalo abamelwane abatsha be protagonist, abahlala edolophini ekubonakala ngathi kumiswe ngexesha kwaye uhanahaniso lubalasele kulo. Aba bantu bafihla iimfihlakalo ezininzi, ezinye azibalulekanga kwaye mhlawumbi ziyahlekisa, kodwa ezinye zinzulu kwaye zibuhlungu. Zonke zingqongwe ziingxaki ezinzima, ezingafaniyo nenyani yangoku.
Umbhali wenza inoveli apho kuxoxwa ngezihloko ezinje ngezenzo ezilungileyo nezingalunganga zabantu. Yintoni egqithisile, umema ukuba bacinge nzulu ngamanqaku anokubangela iintlungu kubantwana kunye neziphumo ezibi abanokuzivelisa.
Konke oku ngokwembono entle, uhlala ubheja kwimpumelelo yokulungileyo kunye nokubi. Guqula umbono wakho, kwaye ubone ubomi ngamehlo ahlukeneyo, vula iphepha kwaye uthembele kwithamsanqa.
Umnqweno omhle ikwazile ukuthimba amawaka abafundi; kwiwebhu, I-88% yezi zinto ivavanya inoveli ngokuqinisekileyo. Uvavanyo lwayo olungaphezulu kwama-2.400 eqongeni lubonakala Amazon, ngomndilili we-4,1 / 5. I-45% yaba basebenzisi banike incwadi iinkwenkwezi ezintlanu kwaye bayishiya imbonakalo yabo emva kokufunda. Kuphela yi-13% kuphela ereyithe imisebenzi eyi-3 okanye ngaphantsi.
Umbhali ifumene amawonga amaninzi ngale mali isavenge yakutshanje, kuzwelonke nakumazwe aphesheya. Nangona ngeli xesha waphalaza isimbo sakhe esingaqhelekanga, imfihlakalo yakhe enomdla kunye nokuyila, kunye nabalinganiswa bakhe abanesibindi kunye nemixholo, bathabathekisa abalandeli bakhe.
Ulwazi ngobomi bomlobi
Ifoto © Patricia A. Llaneza
Intatheli kunye nombhali URosa Montero Uyinzalelwane yaseMadrid, wazalwa ngoLwesithathu kaJanuwari 3, 1951, abazali bakhe nguAmalia Gayo kunye noPascual Montero. Ngaphandle kokuhlala ebuntwaneni kwindawo ethobekileyo, ugqwesileyo wabulela kubukrelekrele bakhe nakwingqikelelo. Ukususela esemncinci kakhulu wayekuthanda ukufunda, ubungqina bokuba yile ngeminyaka emi-5 kuphela wabhala imigca yakhe yokuqala ebalisayo.
Kwi 1969, Wangena kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid ukuba afunde izifundo zengqondo. Kunyaka kamva, waqala ukusebenzela amaphephandaba aliqela aseSpain, kubandakanya: Isakhelo y ePueblo. Amava omsebenzi amenze ukuba anikezele ekuqhubekeni nomsebenzi wakhe njengengcali yeengqondo, ke wayitshintsha intsimi yakhe kwaye kwiminyaka emine kamva waphumelela njengentatheli kwiSikolo saseMadrid soBuntatheli.
Uqale njengombhali wephephandaba kwiphephandaba laseSpain El País, kungekudala emva kokusekwa kwayo, kwi 1976. Apho wenza amanqaku amaninzi, awamvumela ubambe iminyaka emibini (ngo-1980 nango-1981) isikhundla somhleli oyintloko yesongezelelo sangeCawa sephephandaba.
Kuyo yonke indlela yokuhamba kwayo eneengcali kudliwanondlebe, indawo emi kuyo ngokuvela kwayo kunye nendlela yayo. Kwityala lakhe zingaphezu kwama-2.000 XNUMX iingxoxo ezinamanani abalulekileyo abaliweyo, ezinje ngo: Julio Cortázar, Indira Gandhi, Richard Nixon, phakathi kwabanye. Zininzi iiyunivesithi zaseSpain naseLatin ezithathe ubuchule bakhe bokwenza udliwanondlebe njengomzekelo.
Umbhali yaqala kwinoveli Kronike yentliziyo ebuhlungu (1979). Lo msebenzi wothuse uluntu kunye nokugxeka okubhaliweyo ngelo xesha, ngenxa yomxholo wayo malunga nokuzimela kwabasetyhini. Okwangoku Uye kwikhredithi yakhe ibali eli-17, iincwadi zabantwana ezi-4 kunye namabali ama-2. Iyabonakala phakathi kweetekisi zayo: Intombi yomntu odlayo (1997), awaphumelela ngayo amabhaso ePrimavera weenoveli zaseSpain.
Iinoveli zikaRosa Montero
Ingxelo yentliziyo ebuhlungu (1979)
Umsebenzi weDelta (1981)
Ndiza kukuphatha njengendlovukazi (1983)
Mhlekazi oyintanda (1988)
Umhle kwaye umnyama (1993)
Intombi yomntu odlayo (1997)
Intliziyo yetartar (2001)
Umfazi ophambene endlini (2003)
Imbali yeNkosi engabonakaliyo (2005)
Imiyalelo yokusindisa umhlaba (2008)
Iinyembezi emvuleni (2011)
Ingcinga ehlekisayo yokungaphindi ndikubone (2013)
Ubunzima bentliziyo (2015)
Ngamaxesha entiyo (2018)
Umnqweno omhle (2020)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Ngethamsanqa likaRosa Montero